WebPad inowanikwa kurodha mahara | IPhone nhau
WebPad inowanikwa kurodha mahara
Zvekare tinotaura nezvechimwe chikumbiro icho nhasi chinowanikwa kurodha mahara. Ino nguva isu tichaenda kuzotaura nezve kunyorera WebPad, iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store. Nekuda kweWebPad tinogona kuva nemapeji maviri akavhurika pachiratidziri chimwe chete pa iPhone yedu uye nemhando dzePadad dzisingatsigire sarudzo iyi.
iOS 9 yakauya neiyo Split View basa, basa iro yaive yakaganhurirwa kune chaiwo maPad mhando, kwete ese. Kune ese emhando dzePad iPad dzisingaenderane neiri basa uye kune vese vashandisi ve iPhone vanoda kuishandisa, ichi ndicho chiitiko chakanakisa
WebPad ndeye internet browser inowirirana neIOS zvishandiso izvo zvinotibvumidza isu kushandisa maviri Safari windows panguva imwe chete pane yedu iPad kana iPhone ine iyo split split basa. Ichi chishandiso chakanakira vese vashandisi avo hauna iPad inoenderana neiyo Split View basa pamwe neiyo iPhone mune ayo ese mavhezheni.
Iko kushanda kweiri ruviri browser kuri nyore kwazvo zvekuti isu tinongofanira tenderera chishandiso uye chiise chakatwasuka kusvikira mabhurawuza maviri aonekwa. Pamusoro tinofanirwa kuisa mapeji maviri ewebhu atinoda kuona panguva imwe chete. Kana isu tikaisa nhare munzvimbo yakatwasuka, zvinongoratidzira bhurawuza zvichibva paSafari uye zvinoenderanawo nePassword.
1 WebPad Zvimiro
2 Tsananguro yeWebPad yekushandisa
Inoenderana nechero iPad inotsigira iOS 8, ndiko kuti, kubva kuPad ​​2.
Inoenderana ne iPhone.
Kubatanidzwa pamwe nechishandiso kusevha 1Password password.
Kubatanidzwa neSafariVC uye WKWebView
Yakagadzirirwa kwechokwadi kuita zvakawanda
Tsananguro yeWebPad yekushandisa
Kugadziriswa kwekupedzisira: 23-04-2016
Inoenderana ne Mumhuri.
Compatibility: Inoda iOS 8.0 kana kuti gare gare.E Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » WebPad inowanikwa kurodha mahara
Ndichiri kuwana € 2
Iyo app yaive yemahara chete muna Chivabvu 12, zuva rakatumirwa posvo, saka nhasi May 13 inobhadharwa zvakare.
King Tsuro, unovaraidza pikicha mutambo seapp yevhiki
Mukuru weFBI anoyambira kuti hondo naApple haisati yapera